Himalaya Dainik » मलेसियामा धुर्मुस-सुन्तुलीले कती सहयोग प्राप्त गरे ?
मलेसियामा धुर्मुस-सुन्तुलीले कती सहयोग प्राप्त गरे ?
चितवनमा निर्माण गर्न लागिएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणलाई सहयोग जुटाउन मलेसिया पुगेका हाँस्य कलाकर धुर्मुस-सुन्तलीलेे कति सहयोग संकलन गरे सबैलाई चासो रहेको छ । यसै क्रममा सिताराम कट्टेल (धुर्मुस)ले मलेसियामा आफुहरुलाई सोचेभन्दा बढि सहयोग पाएको बताएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा एक स्ट्याटस लेख्दै उनले मलेसियामा प्राप्त भएको सहयोगबारे नेपाल फर्केपछि प्रष्ट रुपमा जानकारी दिने पनि बताए।
उनले फेसबुकमा लेखेका छन् – ‘गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रीकेट रंगशाला निर्माणको सहयोगार्थ जुन उदेश्य लिएर हामी मलेसिया आएका थियौं । मलेसियामा रहनु भएका नेपाली दिदिबहिनी दाजुभाइ हरु बाट हामीले सोँचे भन्दा पनि राम्रो साथ सहयोग र सदभाव पाएका छौं। यहि अभियान लाई लिएर फेरि केहि समय पछि मलेसिया आउने निम्तो पनि पाएका छौं यसले हामिलाइ थप हौसला मिलेको छ । यस पटकको यात्रामा प्राप्त सहयोग हामी नेपाल पुगे पश्चात् जानकारी गराउने छौं। केही भ्रामक समाचार हरुमा कुनै सत्यता नरहेको पनि प्रष्ट पार्न चाहान्छु।’
रंगशाला निर्माणका लागि धुर्मुस–सुन्तली साँझको आयोजना गर्दै उनीहरु मलेसिया पुगेका हुन्। झन्डै तीन अर्बको अनुमानित लागतमा निर्माण हुने भनिएको रंगशाला निर्माणमा मलेसियाबाट राम्रो साथ सहयोग पाउने विश्वास धुर्मुस-सुन्तलीले व्यक्त गरेका थिए
‘सिटी एक्सप्रेस धुर्मुस–सुन्तुली साँझ–२०७५’ नाम दिइएको सो कार्यक्रममा धुर्मस-सुन्तलीसँगै चर्चित लोकगायक बद्री पंगेनी, चर्चित गायिका मेलिना राई, चर्चित लोकगायिका सम्झना भण्डारी लगायतक सहभागिता थियो।